बार्सिलोनाको शानदार जित, मेसीले गरे ह्याट्रिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
बार्सिलोनाको शानदार जित, मेसीले गरे ह्याट्रिक !
असोज ३ । बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको यो वर्षको सिजनमा शानदार सुरुवात गरेको छ । युरोपियन क्षेत्रका शीर्ष लिगमा खेल्ने क्लब बिचको महादेशीय प्रतिस्पर्धा च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणका खेल मंगलबार रातिदेखि सुरु भएका छन् ।
मेस्सीको कप्तानीमा रहेको बार्सिलोनाले समूह बी अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा मंगलबार राति नेदरल्याण्डसको क्लब पिएसभी एन्थोवेनलाई ४-० ले हरायो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई जिताउने क्रममा मेस्सीले ह्याट्रिक गरे । यस्तै उसमान डेम्बेलेले एक गोल गरे ।
बार्सिलोना अन्तिमको १० मिनेट भन्दा बढी समय १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । ७९ औँ मिनेटमा सामुएल उमटिटी दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि बार्सिलोना १० खेलाडीमा सीमति भएको हो ।
मेस्सीले ३१ औँ मिनेटमा फ्रि-किक मार्फत सुन्दर गोल गर्दै बार्सिलोनालाई पहिलो हाफमा १-० को अग्रता दिलाए । ७४ औँ मिनेटमा डेम्बेलेले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
त्यसको तीन मिनेटपछि मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । लगत्तै उमटिटी दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिए ।
तर पनि बार्सिलोना कमजोर देखिएन । मेस्सीले ८७ औँ मिनेटमा व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे भने बार्सिलोनाले ४–० को प्रभावशाली जित पक्का गर्यो ।
समूह बी अन्तर्गतकै अर्को खेलमा सुरुमा पछि परेर पनि इटालियन क्लब इन्टर मिलानले इंग्लिस क्लब टोटनह्यामलाई पराजित गर्न सफल भयो ।
इन्टरले टोटनह्यामलाई २–१ ले पराजित भएको हो । अवे मैदानमा भएको खेलमा ५३ औँ मिनेटमा क्रिष्टियन एरिक्सनको गोलबाट माउरिसिओ पोकेटिनोको टिम टोटनह्यामले अग्रता लिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस अब बार्सिलोनाका कप्तान मेसी
तर अन्तिमको पाँच मिनेट र इन्जुरी समयमा सम्हालिन नसक्दा नतिजा इन्टरलाई सुम्पियो । इन्टरका लागि ८५ औँ मिनेटमा आइकार्डी र इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा वेसिनोले गोल गरे ।
मेस्सीको ४८ औँ ह्याट्रिक
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोना कप्तान मेस्सीले पहिलो हाफमा एक र दोस्रो हाफमा दुई गोल गरी च्याम्पियन्स लिगको यो सिजनको पहिलो खेलमा नै ह्याट्रिक गरे । मेस्सीको यो ह्याट्रिक उनको खेल जीवनको ४८ औँ ह्याट्रिक हो ।
आन्द्रेस इनिएस्टा बिदा भएपछि मेस्सी बार्सिलोनाको कप्तान बनेका छन् र उनी अहिले आफ्नो लयको उच्चतम स्तरमा देखिएका छन् । मेस्सीले यो सिजन ६ खेलमा सात गोल गरिसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप जितें तीर्थयात्रामा जाने मेस्सीको इच्छा
मेस्सीका सबै गोल उत्कृष्ट थिए । तर यो खेलमा गरेको पहिलो फ्रि–किक गोल भने निकै उत्कृष्ट रह्यो । उनले सन् २०१८ मा फ्रि–किकबाटै ८ गोल गरिसकेका छन् ।
मेस्सीले च्याम्पियन्स लिगमा ८ ह्याट्रिकसहित १०४ गोल गरेका छन् । यस्तै उनीले च्याम्पियन्स लिगका लगातार चौथ सिजन गोल गरेका छन् ।
यो रियल मड्रिडका लेजेण्ड राउलको कीर्तिमानसँग बराबरी हो । मेस्सीको लय र सुरुको शानदार जितले यो वर्ष बार्सिलोनाको दबाब च्याम्पियन्स लिगमा रहने देखिएको छ । देश सञ्चारबाट
ट्याग्स: barcelona vs tottenham, Barsilona, Footballar Messi, Leonal Messi